Munyori, maneja wekuisa zvinotsamira muzvirongwa zvePHP | Linux Vakapindwa muropa
Munyori, maneja wekuisa zvinotsamira muzvirongwa zvePHP
Mazuva mashoma apfuura kuvhurwa kweshanduro nyowani yeComposer 2.0 kwakaziviswa, inova maneja wekuisa zvinotsamira muzvirongwa zvePHP.
munyori, inomira kunze kwekutendera kumushandisi iyo sarudza kuti nderipi raibhurari rinodiwa kuti purojekiti ishande, mushure meizvozvo inotarisira basa rekuisa zvisipo kutsamira uye kugadzirisa shanduro nyowani.
Iwo maraibhurari anowanikwa ekumisikidza ari mune iyo Packagist repository, iyo ine zvinopfuura mazana maviri nemakumi maviri neshanu mapakeji.
1 About Munyori
2 Nezve iyo nyowani vhezheni yeComposer 2.0
Munyori akaiswa seyakavimbika yekumisikidza system yakagadzirirwa npm uye bundler package mamaneja mupfungwa muNode.js uye nharaunda dzeRuby.
Iyo system inoshandisa mapakeji zvine chekuita nemamwe mapurojekiti uye yakagadzirirwa kumisikidza kutsamira pane zvemuno maprojekita madhairekitori (senge sarudzo, kune zvakare yepasirese yekumisikidza modhi yesisitimu yese).
Nekukanganisa, kugadzikana kweraibhurari kumisikidzwa zvinokurudzirwa, asi zvakare zvinokwanisika kushandisa zvekuyedza (alpha / beta) uye mapikicha (mapikicha ekuvandudza codebase), ayo anobatsira pakuronga bvunzo inovaka pane inoenderera yekubatanidza masisitimu.
Iyo Komputa kodhi yakanyorwa muPHP uye inogoverwa pasi peMIT rezinesi.
Nezve iyo nyowani vhezheni yeComposer 2.0
Mune vhezheni itsva makuru ekugadzirisa optimization akaitwa uye memory yekushandisa yakaderedzwa. Zvakawanda zvakagadzirwazve, kubva kune iyo protocol kufonera packagist.org pasi kune nzira dzekumisikidza kutsamira.
Iko kurodha kunopihwa mune dzakasiyana metadata hova uye zip mafaera, pamwe iyo nzira yekufananidza kuiswa kwemapakeji yakaitwa. Optimizations yakawedzerwa kune iyo kodhi yekuverenga. Nekuisa chete metadata yepakeji, inoda uye / kana kubvisa mashandiro uye zvigadziriso zvishoma zvinowedzerwa zvakanyanya. Mune mamwe mapurojekiti kumhanyisa kunosvika makumi mashanu muzana kunoonekwa.
Iyo nzira yekuvandudza kutsamira yakagadzirwazve, iyo isina ma bondings kune dhairekitori nyika pane yemuno faira system. Mushure mekupedza iyo yekuvandudza, iyo yekumisikidza maitiro ikozvino otomatiki anotanga neyekutanga kuitiswa kweese mashandiro ayo anoda network kuwana.
Kuita mashandiro enetiweki usati kuiswa kweicho chaiko kwatanga kunobvisa kutaridzika kwemadhairekitori asina kuzadzikiswa muchiitiko chekukundikana kweneti panguva yegadziriro yekumisikidza. Pese pazvinogoneka, netiweki kurodha pasi kune dzakawanda-tambo.
Nokusingaperi, imwe yekuwedzera chikuva sosi yekuwedzera inowedzerwa kumhanya nguva kana uchitanga mutengesi / autoload.php, iyo chengetedza kuti iyo PHP vhezheni uye zvinowedzerwa yakashandiswa kuenzanisa shanduro dzakatsigirwa mune zvinoenderana. Kana paine mutsauko, kukanganisa kunoratidzwa.
Kusimbiswa kunoitwa uchishandisa iyo nyowani Composer \_ InstalledVersions kirasi, iyo inotakurirwa purojekiti yega yega kuona kuti ndeapi mapakeji neshanduro zviripo muchirongwa.
Pamusoro pezvo, zvinotaurwa kuti yakashandiswazve mameseji ekukanganisa ane chekuita nenyaya dzekutsvaga kutsamira. Aya mameseji mapfupi, akajeka, uye aine mashoma zvakapetwa.
Kuti uderedze kwenguva pfupi shanduro panguva yekukwiridzira, shandisa iyo inogadzira "Muumbidzi gadziriso mutengesi / package: 1.0. * ", Izvo zvisingachinje zvirimo mubato mu" composer.json uye hazvizomaka iro rakakiyiwa faira kunge rapera.
Yeimwe shanduko inomira mushanduro iyi nyowani:
Wakawedzera rutsigiro rwenguva-shoma-shoma gadziriso, iyo inogona kushandiswa kana iwe uchida kumbogadziridza kwenguva pfupi kana kudzoreredza vhezheni yepakeji kuti uedze kana kumirira kugadziriswa kwechiputi. Otomatiki kubviswa kwemapakeji ayo asingachadiwe kwave kuitwa.
Sarudzo nyowani chete, kusarudzika uye canonical yakawedzerwa kune repository.
Zviitiko zvitsva zvakawedzerwa kusati kwaitwa mashandiro, kuuraya, pre-boka kugadzirwa, uye post-kurodha faira.
Huwandu hukuru hwemireza mitsva yakawedzerwa.
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Kune rimwe divi, kana iwe uchida kubvunza izvo zvinyorwa, unogona kuzviita kubva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Munyori, maneja wekuisa zvinotsamira muzvirongwa zvePHP
Utatu R14.0.9 inosvika ichivandudza kugadzikana uye kubvisa zvikanganiso
Kushanda nezvakachengetedzwa uchishandisa chinongedzo muUbuntu